1994 Tartanka Golf Open US: Sida Els Won (iyo dhibcaha)
Garsoorka muranka badani wuxuu kaalin ka qaatay 1994 US Open , tartanka oo ku dhamaaday 18-dalool oo ciyaaraha 20-god ah. Tartankan, Oakmont ee gobolka uu ku yaala ee Pennsylvania, ayaa calaamadda Arnold Palmer uusoo bandhigtay koobkan.
Baaqyada Degdegga ah
Guuleystayaal: Ernie Els, 279 (dhibcaha buuxa ee hoose)
Taariikhaha: Juun 16-20, 1994
Koorsada Golf: Oakmont Country Club
Lambarka Furan ee Maraykanka: Tani waxay ahayd markii 94aad ee tartanka horyaalka la ciyaaro.
Xukunkii caawiyey Ernie Els 1994 US Open
Ernie Els ayaa hogaanka u dhiibay laba madaxweyne oo wareega ugu dambeeya ee wareega ugu danbeeya, iyadoo xoogga loo geliyay wareegga sadexaad ee 66aad. Laakiin waxa uu si xun u dhaleeceeyay koobkiisii ​​ugu horeeyay ee wareega ugu dambeeya, oo si qoto dheer uga dhex muuqday bannaanka hore ee Oakmont Country Club.
Tirada badani waxay u aragtay inay tahay fursad. Laakiin saraakiisha sharciga ee USGA ayaa go'aamiyay in gaadiidka baahinta iyo cududiisa la dheereeyey ay ku jireen Els 'ciyaar ciyaar, iyo in gaariga uu ahaa mid ku meel gaar ah oo aan la dabooli karin. Xaqiiqdii, gawaariddu waxay ahayd mid dhaqdhaqaaq ah - way sii waday muddo dheer kadib markii ay dhacdadu socotay. Laakiin sababtoo ah xukunka, Els waxaa loo ogolaaday in dhibic bilaash ah laga helo degaan ay ka baxsanaayeen. Qawaaniinta ayaa marka dambe qirtay inuu qalad ahaa, Els waa in loo baahnaa in kubada laga ciyaaro xaalada dhabta ah, naxdinta leh.
Hase yeeshee, waxaa muhiim ah in la ogaado in xukunku uusan ku guuleysan tartanka Els. Els weli bogsiiyey daloolka, oo waxay ahayd hogaanka habeenkii ugu horreeyay ee hogaamiyaha.
Waxa kale oo wanaagsan in la ogaado in Els wax khalad ah ku sameynin dhacdada; wuxuu weyddiistay xukun iyo inuu mid ka mid ah (oo u muuqda inuu qalad yahay) by sarkaal sharci ah.
Sidee Els u gaartay Tilmaamaha
5ka kooxood ee ugu sarreeya wareega koowaad ka dib wareega koowaad waxaa ka mid ahaa laba legend, labo labo goolhaye oo ka noqday Hall of Famers ... iyo Frank Nobilo.
Legend Tom Watson wuxuu ku guuleystey horiyaalka ugu horreeya ee 68-kii, halyeeykana Jack Nicklaus ayaa la wadaagay mustaqbalka Hall of Families Els iyo Hale Irwin , iyo Nobilo oo ah 69-jir.
Labada nin ee ku dhaawacmay ciyaarta Els, Loren Roberts iyo Colin Montgomerie , ayaa toogtay 76 iyo 71, siday isugu xigaan, wareega 1aad.
Montgomerie waxay u gudubtay kaalinta koowaad iyada oo leh 65 gaaban 2; Els oo toogtay 71 waxaana lagu sawiray afar koron.
Waxay aheyd wareega 3aad halkaasoo Roberts uu u dhaqaaqay 64 kulan oo uu ku soo galay kaalinta seddexaad, Montgomerie. Els ayaa hogaanka u dhiibay 66 gool. Nicklaus, oo da'diisu tahay 54 jir, ayaa ku soo dhacday dabaasha 77 jir, laakiin Watson ayaa weli ku soo laabtay, seddex geesood oo ka mid ah hogaanka.
Watson ayaa ku dhuftey meel shanaad ka dib wareegii ugu dambeeyay, taas oo Els ka toogteen 73, Roberts 70 iyo Mongomerie 70. Saddexdaas waxay ku xirnaayeen 5-sano ka yar 279, iyagoo ku qasbay 18 ciyaarood.
18-Hole Playground ee 1994 US Open
Els waxay bilawday ciyaaro aad u adag, oo leh bog iyo ka dibna seddexleey. Laakiin markii Montgomerie uu fadhiistay - wuxuu ahaa shan ka dambeeyay godka 12-aad - Els iyo Roberts ayaa ku dagaalamay wareegga oo dhan. Labo bog oo uu sameeyay Roberts on No. 5 ayaa isaga ku riday xerada Els. Roberts ayaa hogaaminayay hogaanka horaantii xigta, lakiin Els 'gaar ah oo ah lambarka 7aad ayaa mar kale ku xirey.
Markii Els uu bogsaday 12-aad, Roberts ayaa kor u kacay.
Roberts ayaa hogaaminaya hogaanka horaantii 16aad, ka dibna labadaba lakulmay labadaba. Dhawr qodob oo 18 ah ayaa waxaa loola jeeday Els iyo Roberts inay dhameystiraan wareega xitaa, 74aad.
Sidaa daraadeed dhimashada degdega ah ayaa labadooduba aaday (Montgomerie ayaa meesha ka saaray 78). Els iyo Roberts ayaa sii waday laba godadood oo dheeraad ah, ilaa Roberts ay soo buuxsameen 20-ta god ee maalintii ah, Els ayaana ku guuleystay guusha.
Waxay ahayd Els guushii ugu weyneyd ee horyaalkii ugu weynaa - iyo sidoo kale koobkiisii ​​ugu horeeyay ee PGA Tour .
Natiijooyinka kama dambeysta ah ee 1994 US Open
Natiijooyinka ka soo baxay 1994 Mareykanka oo furan kubadda cagta ayaa ku ciyaaray qeybta A-71 ee Oakmont Country Club ee Oakmont, Pa.
x-Ernie Els 69-71-66-73-2-279 $ 320,000
Colin Montgomerie 71-65-73-70-2-279 $ 141,827
Loren Roberts 76-69-64-70-279 $ 141,827
Curtis Strange 70-70-70-70--280 $ 75,728
John Cook 73-65-73-71-2-282 $ 61,318
Clark Dennis 71-71-70-71-2-283 $ 49,485
Greg Norman 71-71-69-72--283 $ 49,485
Tom Watson 68-73-68-74--283 $ 49,485
Jeff Maggert 71-68-75-70--284 $ 37,179
Frank Nobilo 69-71-68-76--284 $ 37,179
Jeff Sluman 72-69-72-71--284 $ 37,179
Duffy Waldorf 74-68-73-69--284 $ 37,179
David Edwards 73-65-75-72-2-285 $ 29,767
Scott Hoch 72-72-70-71-2-285 $ 29,767
Jim McGovern 73-69-74-69-2-285 $ 29,767
Lamaanayaasha Fred 72-71-69-74--286 $ 25,899
Steve Lowery 71-71-68-76--286 $ 25,899
Seve Ballesteros 72-72-70-73--287 $ 22,477
Hale Irwin 69-69-71-78--287 $ 22,477
Scott Verplank 70-72-75-70--287 $ 22,477
Steve Pate 74-66-71-77--288 $ 19,464
Sam Torrance 72-71-76-69--288 $ 19,464
Bernhard Langer 72-72-73-72--289 $ 17,223
Kirk Triplett 70-71-71-77--289 $ 17,223
Chip Beck 73-73-70-74--290 $ 14,705
Craig Parry 78-68-71-73-290 $ 14,705
Mike Springer 74-72-73-71-290 $ 14,705
Lennie Clements 73-71-73-75-2-292 $ 11,514
Jim Furyk 74-69-74-75-2-292 $ 11,514
Davis Love III 74-72-74-72-2-292 $ 11,514
Jack Nicklaus 69-70-77-76-2-292 $ 11,514
Jumbo Ozaki 70-73-69-80-2-292 $ 11,514
Fulton Allem 73-70-74-76-293 $ 9,578
Mark Carnevale 75-72-76-70-293 $ 9,578
Ben Crenshaw 71-74-70-78-293 $ 9,578
Brad Faxon 73-69-71-80-293 $ 9,578
Tom Kite 73-71-72-77-293 $ 9,578
Tom Lehman 77-68-73-75-293 $ 9,578
Peter Baker 73-73-73-75-294 $ 8,005
Bradley Hughes 71-72-77-74--294 $ 8,005
Gordon J. Brand 73-71-73-77--294 $ 8,005
Brandt Jobe 72-74-68-80--294 $ 8,005
Fran Quinn 75-72-73-75-295 $ 7,222
Fred Funk 74-71-74-77-296 $ 6,595
Paul Goydos 74-72-79-71-296 $ 6,595
Don Walsworth 71-75-73-77-296 $ 6,595
David Berganio Jr. 73-72-76-76--297 $ 5,105
Olin Browne 74-73-77-73--297 $ 5,105
Tim Dunleyey 76-70-78-73--297 $ 5,105
Mike Emery Jr. 74-73-75-75--297 $ 5,105
Jim Gallagher Jr. 74-68-77-78--297 $ 5,105
Barry Lane 77-70-76-74--297 $ 5,105
Wayne Levi 76-70-73-78--297 $ 5,105
Phil Mickelson 75-70-73-79--297 $ 5,105
Tommy Armor III 73-73-79-73-2-298 $ 4,324
Hugh Royer III 72-71-77-78--298 $ 4,324
Scott Simpson 74-73-73-78-2-298 $ 4,324
Steven Richardson 74-73-76-76-299 $ 4,105
Zoeller xuma 76-70-76-77-299 $ 4,105
Doug Martin 76-70-74-81--301 $ 3,967
Dave Rummells 71-74-82-74--301 $ 3,967
Emlyn Aubrey 72-69-81-80--302 $ 3,800
Ed Humenik 74-72-81-75--302 $ 3,800
Mike Smith 74-73-78-77--302 $ 3,800
Arnold Palmer's Notes ugu dambeeyey US Open iyo Qoraalada kale
1994 US Open wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee uu soo ciyaaray Arnold Palmer. Palmer ma uusan ciyaarin US Open tan iyo 1983 -kii markii ugu dambaysay ee US Open booqday Oakmont - laakiin waxaa loo bixiyay ogolaansho gaar ah USGA sababtoo ah Oakmont mar kale kooraska martigelinta. Palmer wuxuu ku koray Latrobe, Pa, iyo Oakmont marwalba waxay ahayd meel gaar ah Palmer. Markii ugu horreysay ee uu furan yahay US Open 1953, wuxuu sidoo kale ahaa Oakmont. Palmer wuxuu toogtay 77-81 halkan oo uu seegay gooyadii.
Waxay sidoo kale ahayd Johnny Miller markii ugu danbeysay ee uu ciyaaro US Open, iyo markii ugu danbeysay ee uu ciyaaray mid ka mid ah afarta horyaal ee waaweyn. Miller wuxuu ahaa 1973-dii horyaalka, sidoo kale Oakmont. Waxa uu seegay gooyadii ayagoo leh 81-76.
Curtis Strange, oo laba jeer ku guuleystay tartanka US Open, ayaa hal mar ka soo baxay garoonkii ciyaarta ka dib markii uu soo dhajiyay afar wareeg oo toos ah oo ah 70 xitaa.
6 Ciyaartoyda ugu fiican ee Masters Golf-ka ee Wakhtiga oo dhan
Sheekada cajiibka ah ee Hal-kaliya -4-Hole-in-One ee Taariikhda Dalxiiska PGA
PGA Tour ee Zurich Classic Going to Form Form Team 2017
Iskuduwaha Xirfadaha Bulshada ee Maraykanka
Maaraynta Qashinka PGA Tour Phoenix Open
2009 Masters: Cayaarta Cayaarta ee Cabrera
Oldest Golfer si loo yareeyo tartanka PGA Tour Tournament
Fasalka Saddexaad Fasiraadda Akhriska Buugaagta
100-ka ugu caansan ee filimka ugu caansan / shaashadaha ee waqtiga oo dhan
Birta ee Kacaanka Warshadaha
Waxaan sugi karaa Dugsiga Grad, Hadda maxaa?
Waa maxay Sayniska Siyaasadeed?
Qaamuusyada Erayada ee Liiska Ciyaaraha Isboortiga
Edgar Degas: Nololkiisa iyo Shaqadiisa
Aqoonyahanka Virginia Tech
Xaqiiqooyin ku saabsan Ayurveda iyo Rice
Qaadasho, Gasho, iyo Xagee
Gaadiidka Kacaanka Warshadaha
Waqtiga Socdaalka: Safarka Hore iyo Mustaqbalka
Isbarbardhigga Isbarbardhigga ACT ee loogu talagalay Fasallada Kulliyadda Florida
Xagee lagu dhisayaa?
Ford F-150 Tilmaamo Gawaadhida: 1987-1996
Waa maxay Tonk Honky?
Miyuu beentaa mid xaq daro?
Liiska Qowmiyadeed ee Hiddaha Dhexe Dhexe
Maxay Sababtey Mooshinka Tiananmen Square?
Maxay yihiin Dhimashada iyo Kordhinta Saddexleyda?
Jaamacada Hampton University GPA, SAT iyo ACT Data
Imagecreate () Function PHP
Liistada Adduunka ee ugu wanaagsan Baahiyaha Kubadda Cagta
Caawimida Ilmaha LDC ee Ururka
Tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay Hiddaha Isboortiga Weyn
Daraasada Cutubka ee Gobolka - Georgia